सरकार र जनता नदीका २ किनारा ! -
सरकार र जनता नदीका २ किनारा !
अहिले बिज्ञान, प्रविधिमा निरन्तर क्रान्तिकारी ईनोभेशन हुदैछ र विद्यमान सिस्टमलाई डिसरप्ट गर्दै जादा मै हुँ भन्ने मानिसहरू पनि किंकर्तव्यविमूढ र ट्वॉ पर्दैछन् । विश्वभरि प्रविधिले समाजमा जबरजस्ति ल्याउने परिवर्तनसंग साथसाथै अगालो मारेर हिड्न नसक्ने नेता, मुलुक, राजनीति, कानुन, प्रशासन र व्यावसायको दिनप्रतिदिन बेहाल हुदै जादैछ। अहिले प्रविधि प्रमूख ड्राईभिङ फोर्स बनिसकेको छ।
राजनीति संचालन, कानुन निर्माण र परिपालन, प्रशासनिक एवं व्यवसाय कुशल संचालनतर्फ ईनोभेशन नगर्ने मुलुकका जनता झन् झन् फँसादमा फस्दै जादैछन् । यो दुनियॉको भाग्य यो बेलामा जस्तो पहिले कहिल्यै बैज्ञानिक र प्राविधिज्ञको हातमा थिएन। अब पनि प्रविधिकर्मीहरूलाई राजनीति र प्रशासनले अनुकूलता सिर्जना नगरिदिने हो भने सबै पक्ष संगसंगै भडखालोमा जाकिदा अचम्म मान्नुपर्ने छैन। परम्परागत संस्कृतिबाट टेक्नोलजिकल संस्कृतिमा जति चाडो संक्रमण गर्न सकियो त्यति सुख र सुरक्षा पाईने छ ।
बुझे हुन्छ, लरोतरो गफ र थुतुनो बजारेर अब काम हुने दिन गइसक्यो ! विज्ञको खुट्टा मल्नुपर्ने युग तथा दिन आईसक्यो। हुन त आफैले मत हालेर नेपाली जनताले पनि यहॉका नेताहरू चुनेका हुन् । तर तिनले हामीले सेवक हैन मालिक पो चुनेका रहेछौं भनेर राम्ररी बुझ्दै गएका छन् । राज्य संयन्त्र र सरकार जनतालाई पीडा दिनका लागि हो, आजका नेताहरू भुईंतहबाटै नेता बनेता पनि चुनिएर सरकारमा वा सत्तामा पुगेपछि जनताबाट मालिकमा गोत्र परिवर्तन गर्ने जात हुन् भन्ने पनि बुझिरहेका छन् । त्यसैले यहॉ सरकार र जनता नदीका दुई किनारा जस्ता देखिदै छन् ।
जनतालाई सरकारले सेवा गर्ला, सहज राहत देला भन्ने त आजसम्म पनि लागेको थिएन, तर अलिकति पीडा कम गर्दिन्छ कि नयॉ सरकार बनेपछि भनेर मत दिएर नयॉ नयॉ सरकार बनाउने अवसर दिने गरेका चैं हुन्छन् । यसैले जुन सरकारले जतिसुकै मत पाएको होस्, सरकारको दीर्घायू होस् भनेर नेपाली जनता कहिले पनि पुजा वा प्रार्थना गर्ने गरेका देखिदैनन् । जबसम्म सरकारका निम्ति जनताले पुजाप्रार्थना गर्ने दिन र अवस्था ल्याईदैन नेपालमा सरकार नढले पनि जनता र सरकारको दिमाग अस्थीर रहिरहनेछ । जनतामा सरकार न आमा पट्टिको न बा पट्टिको भन्ने मनमा रहेसम्म वा सरकार र जनता एकात्म हुने परिस्थिति नबनाईएसम्म यो मुलुकमा ईन्द्रका बाउ चन्द्रलाई सरकार बनाउन दिए पनि सिन्को भॉचिनेवाला छैन ।